ရေး-ကဗျာဝကမ်းခြေ-ကျိုက်က္ခမီ-သံဖြူဇရပ် (၃ ရက် ၂ ည ခရီးစဉ်) | GO & GO Travels
Yours Here Trading
Abalone Extracted Beauty & Cosmetic
User warning: The following module is missing from the file system: sharethis. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home3/cp119992/public_html/goandgo-travels.com/includes/bootstrap.inc).
ရေး-ကဗျာဝကမ်းခြေ-ကျိုက်က္ခမီ-သံဖြူဇရပ် (၃ ရက် ၂ ည ခရီးစဉ်)
လှပတဲ့ အပျိုစင် ကမ်းခြေအဖြစ် ခရီးသွားတွေကြားမှာ အထူးတလည်ရေပန်းစားလာတဲ့ ရေးမြို့က ကဗျာဝ ကမ်းခြေခရီးစဉ်
ငွေဆောင်တိုက ငပလီတို့လောက်တော့မလှပေမဲ့ လူသူနည်းပြီး အမှိုက်လည်းကင်းရှင်းသလို သူ့ အလှနှင့် သူတင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ ကမ်းခြေလေးပါ
အစားအသောက်အနေနဲ့ကတော့ အုန်းရေလေးသောက်ရင်း Seafood အကင်မျိုးစုံနဲ့ ကမ်းခြေက ခုံလေးတွေမှာ နှပ်နေလို့ရပါတယ် ခင်ဗျ ငွေဆောင်လောက်တော့ လှိုင်းမကြီးပေမဲ့ ကျောက်ဆောင်လှလှလေးတွေက တော့ ကဗျာ ဝကမ်းခြေ ရဲ့ အလှပေါ့ခင်ဗျာ လူရရှင်းပြီး ရေကလည်းကြည်တော့ ပင်လယ်ကြီးနောက်ခံထားပြီး ပုံလှလှလေးတွေရိုက်လို့ ရတာကတော့ အသက်ပေါ့နော်
~~~ ကဲမင်မင်ပြောပြတာ စိတ်ဝင်စားသွားရင် မင်မင်နဲ့ အတူ လိုက်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေလည်းလည်းရိုက်ပေးမယ် Pose ပေးနည်းတောင် သင်ပေးဦးမှာပါ ~~
Package စျေးနှုန်း ၁ ယောက်မှ ၅ယောက်အထိ - ၁၃၅၀၀၀ ကျပ်( တစ်ဦးစျေးနှုန်း)၁ ယောက်မှ ရယောက်အထိ - ၁၀၅၀၀၀ကျပ်(တစ်ဦးစျေးနှုန်း)၁ယောက်မှ ၉ယောက်အထိ - ၈၉၀၀၀ကျပ်(တစ်ဦးစျေးနှုန်း)
ခရီးစဉ်ထွက်ခွာမည့် နေ့ရက်များ ၁၄. ၈.၂၀၂၀ မှ ၁၆. ၈.၂၀၂၀ ၂၁. ၈.၂၀၂၀ မှ ၂၃. ၈.၂၀၂၀
( မှတ်ချက် - လူဦးရေနည်းနည်းနဲ့ မိသားစု ပုံစံ ခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ ထွက်မယ့် ခရီးစဉ်ဖြစ်လို့ စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ ရုံးဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကို ဆက်သွယ်ပေးနော် )
လည်ပတ်ရန် Air-con Express Private Car ကြယ်သုံးပွင့် ဟိုတယ်တွင် တစ်ညတာတည်းခိုခွင့်နှင့် မနက်စာ GGI Insurance Tour Guide နေ့စဉ်တစ်ဦးလျင် ရေသန့်တစ်ဘူးနှင့် Snow Towel တစ်ခု ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သောနေရာ ဝင်ကြေးများ ခရီးသွားရင်း Covid-19 ကာကွယ်ရန် Hand Gel နှင့် Mask
အဆိုပါခရီးစဉ် အသေးစိတ် ကို Messenger (or) Viber ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ …
️09-252586021 , 09 765154804 , 09 965154804 တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
လူကိုယ်တိုင်လာရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက အမှတ် ၁၇ (ပထမထပ်) ၊ ၅၃ လမ်း ( အလယ်ဘလောက် ) ၊ ပုဇွန်ထောင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ သို့ လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။ ‍
Company များ ၊ Privates School များ ၊ Family Private များ ၊ အသင်းဖွဲ့များ ၊ Honey Moon သီးသန့် ခရီးစဉ် များ စသည့် ခရီးသွားပြည်သူများ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေရန် မင်မင် တို့ GO & GO Travels and Toursမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
+959765154804, +9595154804
No (17), First floor,53 Street Middle Block , Pazundaung Township ,Yangon.